အမည်နှင့်အမည်သစ်ကိုရသော Rudolph Cassetta ။ ပထမဦးဆုံးနာမတျော၏အဓိပ်ပာယျ, ဇာစ်မြစ်, ထိုအမည်နှင့်အမည်သစ်ကိုရသော Rudolph Cassetta ၏လိုက်ဖက်တဲ့။ အားလုံးအွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုများ။
နာမည်အများစုမှာဘုံနှင့်အဆန်းမျိုးရိုးအမည် Rudolph ။
ပထမဦးဆုံးနာမတျော၏အဓိပ္ပာယ်ကို Rudolph ။ ပထမအမည်ကို Rudolph ဘာကိုဆိုလိုသလဲ
ပထမဦးဆုံးနာမတျော၏မူလအစ Rudolph ။
အခြားဘာသာစကားများ, စာလုံးပေါင်းနှင့်အသံထွက်မျိုးကွဲ, ပထမဦးဆုံးနာမတျော၏အမျိုးသမီးနှင့်အထီးမျိုးကွဲ Rudolph ၌ဤပထမဦးဆုံးနာမည်။
Rudolph ပတျသကျ. အလှနျသေးနုအမည်များ။
သင်ဘယ်လိုကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများနှင့်ဘာသာစကားများ Rudolph စီရင်သလဲ?
ဘယ်လိုပထမအမည်ကို Rudolph Learn အခြားတိုင်းပြည်တွင်အခြားသောဘာသာစကားအားဖြင့်ပထမအမည်ကိုမှကိုက်ညီ။
Rudolph မျိုးရိုးအမည်နှင့်အတူ Compatibility ကိုစမ်းသပ်အမည်။
Rudolph အခြားအပထမဦးဆုံးအမည်များနှင့်အတူ Compatibility ကိုစမ်းသပ်။
Rudolph အကောင်းဆုံးနာမကိုအမှီအဓိပ္ပါယ်များ: ဒေါသ, အရည်အချင်း, လေးနက်, မတည်ငြိမ်သော, စေ့စေ့နားထောင်. ရယူ Rudolph နာမတျော၏အဓိပ္ပာယ်ကို.
Rudolph ပထမဦးဆုံးနာမတျော၏မူလအစ. အင်္ဂလိပ်ပုံစံ Rudolf, imported from Germany in the 19th century. Robert L. May used it in 1939 for his Christmas character Rudolph the Red-Nosed Reindeer. ရယူ Rudolph ပထမဦးဆုံးနာမတျော၏မူလအစ.
Rudolph name ကို ပတျသကျ. အလှနျသေးနု: ကရူ. ရယူ Rudolph များအတွက်အမည်ဝှက်.
ကူးယူမှတ်တမ်းတင်သို့မဟုတ်ဘယ်လိုပထမအမည်ကိုအသံထွက်ဖို့ Rudolph: ROO-dahlf. Rudolph စီရင်ဖို့ကိုဘယ်လို.
Rudolph ဘို့ပြောရလျှင်အမည်များကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများနှင့်ဘာသာစကားများ: Fito, Hrodulf, Hrolf, Hrólfr, Hroðulf, Hróðólfr, Hrothulf, Rodolf, Rodolfito, Rodolfo, Rodolph, Rodolphe, Roel, Roelof, Rolf, Roul, ကရူ, Rudolf, Ruedi, Ruud. ရယူ Rudolph အခြားဘာသာစကားများ.
နာမည်အသုံးအများဆုံးမျိုးရိုးအမည် Rudolph: Bystryk, Thornber, Ortmann, Smith, Borodec. ရယူ နာမည်မျိုးရိုးအမည်စာရင်း Rudolph.
နောက်ဆုံးအမည်နှင့်အတူအသုံးအများဆုံးအမည်များ Cassetta: Kenton, Harlan, Chung, အာဗြဟံသည်, Rudolph, အာဗြဟံသည်. ရယူ Cassetta နှင့်အတူသွားသောအမည်များ.
Rudolph Cassetta အလားတူအမည်များနှင့်မျိုးရိုးအမည်
Rudolph Cassetta ကရူ Cassetta Fito Cassetta Hrodulf Cassetta Hrolf Cassetta Hrólfr Cassetta Hroðulf Cassetta Hróðólfr Cassetta Hrothulf Cassetta Rodolf Cassetta Rodolfito Cassetta Rodolfo Cassetta Rodolph Cassetta Rodolphe Cassetta Roel Cassetta Roelof Cassetta Rolf Cassetta Roul Cassetta ကရူ Cassetta Rudolf Cassetta Ruedi Cassetta Ruud Cassetta